Doogee N20 Pro: Ekwentị ọhụrụ na Helio P60 na gam akporo 10 | Gam akporosis
Doogee N20 Pro: Ekwentị ọhụrụ na Helio P60 na gam akporo 10
Onye Asia na-emepụta Doogee ekwuwaala na ohuru Doogee N20 Pro, smartphone nke nwere oke oke na ibu ibu maka ahịa ndị China na mbido. Ekwentị mkpanaka na-aghọ otu n'ime ọtụtụ nhọrọ ndị ụlọ ọrụ na-enye mgbe ị kwusachara Doogee x95 y Doogee S88 Pro na nke a 2020.
Gosiputa ihe ngwucha di nma, ha emeela ka uzo a di nma, ebe o nwere ihuenyo karie bezels, nke na-eme ka ọ nọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sentimita 6,4 nke ahụ na-enye ihe niile. Ọ na-abịa na ndò atọ, iji nwee ike ịhọrọ otu agba ma ọ bụ ọzọ na ọnụahịa dị n'okpuru dollar 110 nke ọnụ ahịa a bara uru.
1 Doogee N20 Pro, ihe niile gbasara ụdị ntinye ọhụrụ a
2 Nnweta na ọnụahịa
Doogee N20 Pro, ihe niile gbasara ụdị ntinye ọhụrụ a
El Doogee N20 Pro wunye nnukwu ihuenyo nke 6,3 sentimita asatọ na mkpebi HD zuru ezu (1.080 pikselụ), o nwere 19: 9 ruru na nchapụta zuru oke n'oge niile. Na N20 Pro n’aka nke ọzọ na-etinye igwefoto 16 megapixel iji were foto dị mma, vidiyo ma mee nzukọ vidiyo zuru oke.
Maka ihe nlere a ha jiri a MediaTek Helio P60 processor na Mali G-72 MP3 graphics chip, na-agbakwunye 6 GB nke RAM nke zuru ezu ịkwaga ihe niile, ngwanrọ na ngwa ahụ, ọ nwekwara nchekwa nke 128 GB - ohere ịbawanye -. Batrị ahụ buru ibu, 4.400 mAh na onye nrụpụta na-emesi obi ike na ọ nwere nnwere onwe maka ihe karịrị otu ụbọchị na-arụ ọrụ.
El Doogee N20 Pro n'azu nwere ihe mmetụta anọ, ihe dị mkpa bụ megapixels 16, nke abụọ bụ 8pipixel ultra-wide unit, nke atọ bụ 2 megapixel macro sensor, na nke ikpeazụ bụ ihe omimi 2 megapixel. Ọ nwere njikọ 4G-LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 na GPS, ha niile na-enye gị ohere ijikọ mgbe niile.
IKIRU 6.3-anụ ọhịa IPS LCD na mkpebi HD zuru oke
Nhazi Mediatek Helio P60 8-isi
Ohere TERLỌ N'IME 128 GB - Site na ohere ịgbasa ruo 256 GB site na MicroSD
GHARA CAMERAS 16 MP Isi ihe mmetụta - 8 MP Ultra Wide Sensor - 2 MP Macro Sensor - 2 MP Omimi ihe mmetụta
UMUAKA 4.400 mAh
Njikọ 4G - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi - GPS
Mkpụrụ na arọ: 8.8 mm - 175 grams
El Doogee N20 Pro ga-akwụ ụgwọ $ 120 site na August 10 ruo 11 (ihe dị ka euro 101 iji gbanwee), mana ọ nwere ike ịgbada na 110 dollar na koodu nkwado site na ụlọ ọrụ ahụ. O nwere agba atọ: isi awọ, odo odo, na anunu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Doogee N20 Pro: Ekwentị ọhụrụ na Helio P60 na gam akporo 10
Samsung Galaxy Note 20: Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ahịrị ọhụrụ
Etu esi eji ngwa Google Smart Lock